Bayern oo xaqiijisay in bartilmaameedka Arsenal uu yahay beddelka Sane | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Bayern oo xaqiijisay in bartilmaameedka Arsenal uu yahay beddelka Sane
Bayern oo xaqiijisay in bartilmaameedka Arsenal uu yahay beddelka Sane
Posted by: Mahad Mohamed June 12, 2019
Himilo FM –Bayern Munich ayaa laga yaabaa inay soo galaan tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka bartilmaameedka u ah Arsenal Yannick Carrasco oo katirsan Dalian Yifang haddii ay ku fashilmaan saxiixa xiddiga Manchester City Leroy Sane.
Kooxda heysata horyaalka Bundesliga ayaa raadineysa inay buuxiso boosaska Franck Ribery iyo Arjen Robben oo ka tagaya, islamarkaana ay doonayaan inay Sané dib ugu soo celiyaan Germany.
Sane wuxuu galayaa labadiisa sanno ee ugu dambeysa qandaraaskiisa Etihad inkasta oo City ay isku dayday inay heshiis dheer la gaarto wakhtiyo badan oo aysan awoodin inay heshiis la galaan.
Taas ayaa Bayern ku siyaadisay xiisaha, inkastoo madaxweynaha Uli Hoeness uu qirtay inay adag tahay in lala soo saxiixdo Sane iyadoo dalabyada City ay ku doonayaan uu yahay 90 milyan ginni.
Iyadoo Bayern ay ku adagtahay inay la kulanto dalabaadka City, waxay u weecdeen bartilmaameedyo kale oo uu ku jiro Carrasco oo doonaya inuu ka tago China xagaagan.
Carrasco ayaa lagu heli karaa £ 25m, waxaana uu diyaar u yahay inuu hoos u dhigo mushaharkiisa si uu ugu laabto Yurub iyadoo ciyaaryahanka reer Belgium uu haatan ku qaadanayo qiyaastii 170 kun ginni isbuucii.
Ciyaartoyda kale ee liiska ugu jira Bayern ayaa ah Julian Draxler oo u muuqda inuu ka tagayo PSG iyo Callum Hudson-Odoi, inkastoo xiddiga reer England uu u muuqdo inuu sii joogayo Chelsea xilli ciyaareedka soo socda.
Previous: Juan Mata oo ka fiirsanaya dalabyo ka yimid Turkiga